P-Mix 755 + 808 + 1064nm diode laser umatshini wokususa iinwele
755 808 1064nm Diode laser umatshini ukususwa iinwele ikakhulu ukususwa iinwele yobungcali.
Lo matshini yi-FDA kunye ne-Medical CE evunyiweyo.
Inesiphatho esiphakamileyo somgangatho ophezulu we-2000W, ububanzi bokubetha okufutshane, ke unyango alukho zintlungu, kunye nobomi obude kakhulu, akukho mda wokudubula.
Uhlobo lweLaser: Ubunzulu obuphezulu beDiode yeLaser
Laser Handle Isiphumo Power: 2000W
Amandla apheleleyo: 4000W
Ubungakanani bendawo: 12mm * 23mm
Isiqinisekiso: Iminyaka emi-2 ayikhawulelwanga
Kwamaza: 755nm 808nm 1064nm
Ukupholisa kwenkqubo: Iqondo lobushushu rhoqo -25
Bonisa: Isikrini semibala emininzi ye-10.4 intshi
Uqeqesho: Incwadana yomsebenzisi + yeVidiyo + yoQeqesho kwi-Intanethi
Ubungakanani bendawo: 12mm * 20mm
Isiqinisekiso: iminyaka eyi-2
Rhoqo: 1-10Hz Adjustable
Ukupholisa kwenkqubo: Ubushushu obuhlala busenziwa efrijini 25
Ithiyori esisiseko yoMatshini wokususa iinwele zeLiode sisiphumo sebhayiloji. Umatshini ukhupha i-laser engama-808nm enokufunxwa ngokulula ngumbala okwi-follicle yeenwele ngelixa ungazonakalisi i-epidermis yesiqhelo ejikelezileyo. Amandla ombane afunxwe ngumbala kwisinqeni senwele nakwifollicle emva koko yaguqulwa yenziwa amandla obushushu, ngaloo ndlela inyusa ubushushu be follicle, de ubushushu buphezulu ngokwaneleyo, ubume be follicle butshabalalisiwe abunakuphinda buguqulwe, i-follicle etshabalalisiweyo iyakususwa emva kwexesha lenkqubo yendalo ebonakalayo, ke ngoko fezekisa injongo yokususwa kweenwele okusisigxina.
1. Eyona laser wavelength ilungileyo
I-755 + 808 + 1064nm ilungele ukufunxa i-melanin ukuze isebenze kwiindawo ezahlukeneyo kunye nefollicle yeenwele kwaye ifikelele ekususeni naziphi na iinwele ngokufanelekileyo. Ukusuka kumzobo, sinokubona i-808nm ilunge kakhulu ekufunxeni i-melanin kwaye inciphise abanye.
2. Ububanzi be-laser pulse ububanzi
Ixesha lokubetha kweLaser yi-10ms ukuya kwi-80ms ehlengahlengiswayo, inokwenza unyango olusebenzayo ngokukodwa kwiinwele ezahlukeneyo kwaye ihlala ihleli!
3. Akukho mbala, usetyenziselwa naluphi na uhlobo lolusu.
Inkqubo ye-P-808 yokususa iinwele isebenzisa itekhnoloji yokungena kwaye ulusu luthatha ii-lasers ezimbalwa kwaye akukho mbala.
4. Inkqubo yokupholisa isafire emsulwa inokuqinisekisa ukuba unyango lukhuseleke ngakumbi kwaye alonzakalisi ulusu.
Inkqubo yokupholisa isafire echanekileyo yeP-808 yenkqubo yokususa iinwele inokuqinisekisa ukuba ugqirha usebenzisa amandla aphezulu kwaye angalimazi ulusu. Olu hlobo lwenkqubo yokupholisa inokuqinisekisa ukuba akukho nzakalo kulusu xa izigulana zinikwa uxinzelelo ngakumbi. Njengoko kuxeliwe, uxinzelelo lunokunyusa i-30% -40% yokukhanya.
5. Ubungakanani bendawo enkulu bunokukhawulezisa isantya sonyango.
I-P-808 isebenzisa i-12 * 12mm ubukhulu bendawo enkulu. Iqinisekisa ukuba indawo yokususwa kweenwele enkulu kunye nokukhawulezisa unyango kunye nokusebenza kakuhle. Ngenxa yobukhulu bendawo enkulu, inokubaleka kunyango oluphindaphindiweyo kwindawo yeenwele.
6. Super enkulu yokwenene umbala touch screen yenza ukusebenza kube lula ngakumbi nge-10.4 intshi yemibala yokuthinta isikrini, unokukhetha indoda okanye umfazi, umbala wolusu kunye neendawo zonyango, kulula kakhulu ukuba uzenze!
1. Ukuchukumisa isikrini ngowona msebenzi uphambili kunye nenxalenye yokubonisa yenkqubo yokususa iinwele.
2. Ukwamkela umbala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe, ujongano luluhle, luyafundeka kwaye luyacingela.
3. Ngokwe-ergonomics, ujongano lomsebenzisi luyilelwe ngokwahlukeneyo kumadoda nabasetyhini.
4. Ngokusebenzisa isikrini sokuchukumisa, unokufezekisa imisebenzi ebandakanya ukucima, ukuseta ipharamitha ye-laser kwaye ukulungele kwaye usebenzise i-laser.
5. Unokwenza kuphela useto lweparameter, utshintsho kwimowudi, ukuvulwa kwefriji kunye nokucima ngexesha lokulinda imo.
Yasekwa ngo-2005, Beijing sano Ubuhle S & T Co., Ltd ithatha ekhokelela ekusebenziseni laser phambili kunye nobuchwepheshe ukukhanya olunzulu kushishino zonyango kunye nobuhle.
Ngoku siphuhlise uthotho lweMona IPL, ukukhanya kwe-E, ukukhanya kwe-Co2 laser, i-808nm diode laser, i-ultrasonic cavitations, i-RF yeqhezu kunye ne-laser yokukhulisa iinwele kwakhona.
Ngeqela le-R & D elisebenzayo, amandla emveliso kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho ethembekileyo, uBeijing Sanhe Ubuhle unikezela ngenkonzo ye-OEM kunye ne-ODM kwaye uncede abathengi bethu bazenzele igama kunye nokhuphiswano ngakumbi kwimarike.
Yonke inkqubo yokuvelisa iphantsi kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO13485 kunye nomdlalo nesicelo sokuqinisekiswa kwe-CE.
UBeijing Sanhe Ubuhle buza kusebenza nzima rhoqo ekuboneleleni ngemveliso efanelekileyo nasemva kwenkonzo yokuthengisa.
Egqithileyo Umatshini Wokwakha Isihlunu se-EMSculpt
Okulandelayo: I-P-mix diode laser ukususwa kweenwele kunye nobude obuthathu
Ukususwa kweenwele ezingama-755 + 808 + 1064nm
Isixhobo sokususa iinwele ezingama-808nm FDA
Umatshini wokususa iinwele we-laser
ukususwa kweenwele ngokusisigxina
Ephathekayo 600w 808nm Diode Laser Izinwele Ukususwa Ma ...
P-mix diode laser ukususwa iinwele amaza kathathu ...
1200W diode laser umatshini ukususwa iinwele sano las ...
Isaluni yobuhle entsha esisigxina eyi-755 808 ...
Shr Opt Ipl Ukususwa kweenwele, Ubuhle be-CO2 Laser, Ukususwa kwamabala amabala, Shr IPL Khetha, Umatshini weLaser we-Co2, Umatshini wokukhuthaza izihlunu ze-Ems,